Indlela yokulahlekelwa isisindo ngokuzivocavoca nangaphandle kokutya?
Izidlo ezinzulu ngokuthe ngcembe kodwa zinyamalala ngokukhawuleza ebomini babantu kwaye zishintshe imithetho yazo yokulahleka kwemithwalo, esekelwe kwizinto zenzululwazi. Le mithetho ilula ngokulula, kufuneka iqhutywe rhoqo kwaye kufuneka uyenze indlela yokuphila ngokuqhelekileyo, kunokuba wenze i-jerks okanye nemigudu yamaqhawe. Kule ncwadi, sifuna ukukuxelela indlela yokulahlekelwa isisindo ngokuzivocavoca nangaphandle kwesidlo.
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngaphandle kokutya: imigaqo-siseko.
Umgaqo oyintloko wokulahlekelwa isisindo ngaphandle kokutya kukudla kweekhalori ezimbalwa emzimbeni kunokuba zidliwe. Kulo mgaqo kusetyenziswa oku: okunesondlo sokutya okunxulumene nokusebenza ngokomzimba, ukuphumla okuphezulu kunye nokunciphisa izinga lokunyamezela.
Kodwa ngokubonakala ngathi kulula ukwenza le migaqo, akulula ukulandela. Ukukrazula ubunzima obuninzi, kuyimfuneko ukuba le migaqo ingene ebomini kwaye ingqalelo phantsi komntu. Akukuso kulula ukuzisa lolu lwazi kwi-subconscious, kwaye abo bafuna ukunciphisa umzimba baqonda indlela yokwenza okulungileyo, kodwa bahlala bephula kwaye baphula omnye umthetho okanye omnye umthetho. Ukuba ulwazi luya kwengqondo engqondweni, idlulisa ingqalelo, imigaqo akufanele iphulwe, kuba i-subconscious ayikwazi ukugxeka ulwazi, kwaye iya kwenza oko kubeka kuyo.
Ukuba umntu akakwazi ukujamelana naye kunye neminqweno yakhe, ngoko-psychotherapy iya kumnceda. Iingcali ngoncedo lwezakhono ezizodwa ziya kungena kwingcaciso yakhe engathinteliyo eya kuvimbela ukuphulwa kwemimiselo ethile.
Isondlo xa usweleka ngaphandle kokutya.
Umsebenzi oyintloko wokuthi kuthiwa unomdla wokondla kukubonelela ngomzimba ngazo zonke izinto ezibaluleke kakhulu ebomini kwaye, ngokubanzi kunokwenzeka, ukunciphisa ukusetyenziswa kwemikhiqizo engozi, enzima kakhulu ukuyinqabela, kuba iyancasa kakhulu.
Into ethile, enye yezona zinto ziyimfuneko, kwaye ngaphandle kokuba yiphi na into engakwaziyo ukuba ikhona, iprotheni eya ekwakheni iiseli zomzimba womntu. Iiprotheyini zingaba zezityalo okanye izilwanyana. Kuba umzimba, zombini iiprotheni kunye nezinye iiprotheni ziyimfuneko, ngoko awukwazi ukuyeka nayiphi na uhlobo. Iiprotheni zemvelaphi yezilwanyana zitholakala kwi-low fat fat and a meat stewed, kwiintlanzi, amaqanda, ukutya kwezilwanyana zasemhlabeni, iimveliso zerhasi ezincinci. Iiprotheyini zemvelaphi yemifuno zifumaneka kwizityalo, i-soy, iimbotyi. Ukungabikho kokutya kwabo okanye ukutya ngokungafanekiyo kunabo bonke amanqatha - inyama, intlanzi, iimveliso zobisi, iisuthi.
I-carbohydrate enye into ebalulekileyo yomzimba. I-carbohydrate enzima kakhulu, efumaneka kwiiyolimo, kwimifuno, kwisonka esivela kugugu olupheleleyo, luncedo kakhulu. I-carbohydrate elula ifunyenwe kwiziqhamo ezintle kakhulu. Iintyatyambo nezityalo ziqukethe ezininzi iivithamini kunye neemaminerali ezikhuthaza ukukhawuleza kweenkqubo ze-metabolic, kwaye ngenxa yoko, ukulahleka kwesisindo. Ukunciphisa isidingo esivela kumnandi, ephucukileyo, kunye nakwiphuza elimnandi.
Into elandelayo efunekayo emzimbeni ngamafutha. Imveliso kunye nemveliso yobisi inika amafutha ezilwanyana, zanele kwiimveliso eziphantsi kweenqatha. Amafutha atyalayo aphuma kwioli yemifuno, eyongezwa kumasaladi, okanye kulawo asetshenziselwa ukupheka.
Ukulahlekelwa isisindo ngokuzivocavoca, kodwa ngaphandle kwesidlo.
Napha, kwakhona, kukho amaqhinga. Ngethuba leeseshoni zexesha elifutshane kunye nokusebenza ngamandla ngokomzimba, ii-carbohydrates stores ziza kuqala ukusetyenziswa, kuba lo ngumthombo omkhulu wamandla, osebenza ngokukhawuleza. Ngokukhawuleza ukuba i-carbohydrate izitolo ziphelile, ukufika kwamafutha kuza, okufakwe kwi-fat fatcut.
I-carbohydrates stores, njengoko sele isisungulwe, ichithwa imizuzu engama-30 idlala imidlalo, oko kuthetha ukuba ubude bomsebenzi kufuneka kube ubuncinane kwiyure. Musa ukuba ulayishe umzimba wakho, ufanele unike imithwalo eninzi. Kwixesha elidlulileyo, kukho umlutha kumthwalo, kwaye ngoko ke kufuneka bahlale banda ngokunyuka.
Kufuneka usebenzise ii-2-3 ngeveki. Ukutshintshwa kwemithwalo enamandla kunye nexesha elifutshane kunye nokuzilolonga nokukhawuleza, njengoko kusekwe, kukhuthaza ukutshiswa kwamafutha.
Ekuzilolweni ngokomzimba, into ephambili kukunika imithwalo encinane. Ngokomzekelo, ukuba umntu uye waqhubeka ephila ngendlela yokuphila, kwaye emva koko, ekubeni unqume ukulahlekelwa isisindo ngoncedo lokuqeqeshwa ngokomzimba, waqala ukusebenza nzima, oko kuya kulimaza ngokwakhe. Intliziyo engafundile iyakhathazeka, izihlunu ziya kugula emva kwemithwalo enzima, kwaye loo mdlali-ntlalontle kwiimeko ezininzi akasayi kufuna ukuqhubeka nezifundo zakhe.
Ngokunyuka kancinci kwimithwalo, intliziyo iqeqeshiwe (le nto iyimisipha), kwaye umzimba wonke ujwayele ukuthwala. Ngexesha elide, umzimba awuyi kuba mnandi kuphela, kodwa uyafuneka. Baya kuzisa iintlawulo zezempilo kwaye bancede ukulahla ubunzima obunzima.
Ukutya ngokulahleka kokunciphisa umzimba
I-Medbol: isethi yokuzivocavoca ngebhola yonyango
I-Aqua aerobics: ukunyamezela, ukuguquguquka nokulungelelanisa
Sichitha iikhalori, senza ishishini
I-Scandinavian ihamba ngeentonga
I-conquellette ne-broccoli, itamatato kunye nebhekoni yokubhema
Indlela yokuziphatha xa ubona ipakethe yezinja
Isaladi efudumele ngamakhowe
Usuku Lentsapho, Uthando Nokunyaniseka 2016 eRashiya: Imbali yeeholide eRashiya kunye nezithethe. Siyavuyisela ngoMhla woNtsapho 2016 kwivesi kunye neprose
Konke malunga nama-facial
Kunokuba uhlambe oluhlaza elukhumbeni?
Indlela yokuba ipenki yehaki?
UKarl Lagerfeld uphuhlisa umgca omtsha wengubo - abantwana
I-Saladi kunye neklabishi, i-daikon kunye ne-karoti
Indlela yokudibanisa i-baby booties yintsana: amaqhinga kunye neyinyathelo ngamanyathelo
Iinkalo ezinomdla malunga nokukhwehlela, kunye nonyango lwayo
Ukuxilongwa ngokulungelelaniswa kwezingane zasesikolweni sokufunda esikolweni